Inona ny fepetra tokony horaisin'ireo mpivarotra hahomby amin'ny Internet | Martech Zone
Ny taonjato faha-21 dia nahita ny fisian'ny teknolojia marobe izay ahafahantsika mivarotra am-pahombiazana ireo orinasa amin'ny fomba miharo sy misy fiantraikany kokoa raha oharina amin'ny taloha. Manomboka amin'ny bilaogy, fivarotana ecommerce, tsena an-tserasera ka hatrany amin'ny fantsona media sosialy, ny tranonkala dia lasa sehatry ny fampahalalana ho an'ny daholobe ho karohin'ny mpanjifa sy hohaniny. Sambany, namorona fotoana vaovao ho an'ny orinasa ny Internet satria ny fitaovana niomerika dia nanampy tamin'ny famolavolana sy ny fanamafisana ny ezaka amin'ny varotra manerana ny sehatra maro.
Fa amin'ny maha mpivarotra azy amin'ny vanim-potoana dizitaly dia mety manjary mavesatra amin'ny toerana hanombohana rehefa mahita ny toerana misy ny mpanjifanao sy ny fomba hifandraisana amin'izy ireo.
Ny fisarihana ny sain'ny mpanjifa dia sarotra kokoa noho ny hatramin'izay satria ny fiheverana dia miparitaka amin'ireo fantsona, fitaovana ary sehatra maro. Mba hahatonga azy io ho sarotra kokoa, ny hafatra fandefasana nentim-paharazana dia tsy mandaitra intsony. Ny mpanjifa dia maniry ny hafatra mifandraika amin'izany izay mahatratra azy ireo amin'ny alàlan'ny safidiny medium ary atolotra ho resaka. Mike Dover, mpiara-manoratra amin'ny WIKIBRANDS: Famerenana amin'ny laoniny ny orinasanao amin'ny tsenan'ny mpanjifa
Miaraka amin'ireo safidy tsy misy farany hita amin'ny Internet, dia sarotra ny mamaritra hoe inona ny hetsika tokony hatao mba hananganana paikady fifandraisan'ny mpanjifa mahomby hananganana orinasanao. Saingy tonga amin'ny fametrahana ny làlan'ny fihetsikao izany rehetra izany. Ireo mpivarotra dia mila mamorona paikady tsy hisarihana ny mpanjifa fotsiny, fa mba hamoronana fifandraisana maharitra misy akony eo amin'ny mangarahara sy ny fitokisana izay hiteraka fivarotana tsy fivadihana sy marika.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy ho an'ny mpivarotra momba ny fomba fananganana paikady marketing mahomby:
Fantaro ny fomba vaovao amin'ny marketing
Raha tokony handany ny teti-bolanao amin'ny marketing nentin-drazana toy ny dokam-barotra pirinty na dokam-barotra amin'ny radio sy fahitalavitra dia mifantoha amin'ny fantsom-barotra nomerika izay hanampy ny orinasanao hitombo amin'ny Internet. Ny varotra mitambatra dia manambatra ny fomba fanaovana doka taloha amin'ny teknolojia ankehitriny amin'ny alàlan'ny fampielezana marketing amin'ny mailaka, fitorahana bilaogy ary fantsona media sosialy toy ny Facebook na Twitter. Ireo mpanjifa ankehitriny dia mifindra amin'ny Internet hifandray amin'ny marika. Ireo làlana ireo dia tsy vitan'ny hoe manatsara ny tratranao rehetra, fa mampitombo ny fahafahanao mifandray amin'ny mpihaino marobe.
Mamorona paikady atiny mifandraika
Ny fananganana fanatrehana nomerika dia ny famelana dian-tongotra nomerika ary hitan'ny mpanjifa mety. Eo amin'ny tsena ankehitriny, 70% ny mpanjifa aleony mahafantatra orinasa amin'ny alàlan'ny tena fampahalalana fa tsy doka. Atombohy ny fananganana fifandraisana tsara kokoa amin'ny alàlan'ny mangarahara sy fahatokisana amin'ny famoronana atiny multimedia. Ny mpanjifa dia tsy mitsahatra mitady fampahalalana an-tserasera ary tsy mamorona atiny mba hamoronana atiny, mifantoha amin'ny indostria anao manokana sy ny lohahevitra manintona. Tsy vitan'ny fampitomboanao ny fahafahanao ho hita an-tserasera amin'ny alàlan'ny atiny mifandraika amin'izany, fa koa ny fananganana ny lazanao ho fahefana azo itokisana. Manampy lanja bebe kokoa amin'ny atinyo amin'ny alàlan'ny fampidirana endrika haino aman-jery hafa toy ny sary, horonan-tsary, ary na ny podcast aza - hanatsara ny fahafahanao ho hita an-tserasera amin'ny fanomezana fampahalalana misy dikany ho an'ny mpanjifa efa misy sy mety hitranga.
Midira amin'ny resaka amin'ny mpanjifanao
Ny fifandraisana amin'ny mpanjifanao no tena ilaina. Na valiny tsotra ao amin'ny Twitter izany, mamaly ny fanontanian'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny mpanjifa, na manome azy ireo fifanarahana manokana noho ny tsy fivadihan'izy ireo, ny fandraisana andraikitra dia zava-dehibe rehefa manangana fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifa. Manana fahefana sy hery mitaona betsaka noho ny teo aloha ny mpanjifa satria nanamafy ny feony ny Internet mba ho re amin'ny alàlan'ny lahatsoratra sosialy, forum ary hevitra. Ny fihainoana sy ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa dia ahafahan'ny mpivarotra mahatakatra izay tokony hidiran'ny vondrom-piarahamonina ary izay resaka tokony hidirany.
Fakafakao ny ezaka ataon'ny marketing
Raha te hahalala ny fahombiazan'ny paikadin'ny votoatinao, dia tsy maintsy jerenao ireo isa. Amin'ny alàlan'ny antsipiriany Analytics, azonao atao ny mahazo fanazavana momba ny bilaogy iza no mahomby kokoa, ny tanjonao amin'ny ankapobeny, ary ny faritra ilainao hivoarana. Ilaina ny Analytics rehefa mamorona tetikady marketing dizitaly mahomby satria rehefa mandeha ny fotoana dia ho afaka maminavina izay fironana hitranga ianao, karazana haino aman-jery iza no mora ekena kokoa raha ny mpihaino anao no jerena, ary ny fantsom-barotra inona no miasa tsara indrindra amin'ny orinasanao.
Raha tsy misy ny paikadim-pifandraisana an-tsokosoko an'ny mpanjifa dizitaly, dia hitohy hatrany ny elanelana amin'ny mpivarotra raha ny amin'ny fananganana ny marika. Raha tokony hifantoka amin'ny dokam-barotra atosika any amin'ny mpanjifa izy ireo, ny mpivarotra ankehitriny dia mila manova ny sehatra nomerika ary manangana paikady maharitra mifototra amin'ny fifamatorana izay misarika ny mpanjifa hiditra.
Raha tsorina, dia manomboka amin'ny fananganana paikady marketing votoaty mavitrika ary koa ny famantarana ireo fitaovana sy fantsom-pivarotana ilaina amin'ny fizarana sy fizarana. Ity fampitambarana famoronana haino aman-jery, media sosialy ary Analytics tena ilaina amin'ny fahombiazana amin'ny Internet na orinasa lehibe ianao, orinasa kely, na koa mpandraharaha. Ny fifamofoana dia manangana resaka izay manomboka amin'ny mangarahara amin'ny alàlan'ny marketing amin'ny atiny, ahafahan'ny mpanjifa mahita anao an-tserasera amin'ny alàlan'ny fangatahana fikarohana izay miverina amin'ny tranokalanao.
Ny tsena anio dia mitaky ny marika rehetra hifaninana amin'ny nomerika ary ny mpivarotra izay mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny maha-atiny, ny mpanjifa ary ny data entin'izy ireo no handrisika ny marika hamita fahombiazana.
Tags: tetik'asa ara-barotra ao amin'ny marketingafa-po paikadyresakaCustomersdian-tongotra dizitalyfanatrehan'ny nomerikaFacebookFacebook Marketingholonisvarotra mitambatrafomba marketingfahombiazana amin'ny marketingfahombiazana amin'ny marketing amin'ny Internetatiny mifandraikaresaka an-tseraseraTwitterMarketing amin'ny Twitter
SeeVolution: Heatmaps sy Analytics amin'ny fotoana tena izy
Jul 3, 2015 amin'ny 6: 10 AM
Ny fandinihana ny ezaka ataoko amin'ny varotra no tena zava-dehibe indrindra amiko satria tsy te hametraka vola sy angovo ho zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny aho indrindra raha manana safidy hanara-maso azy io hialana amin'izany.
Ny zava-dehibe mitovy, ary voalazanao fa, dia ny famolavolana paikady atiny mifandraika amin'izany. Raha ny fahitako azy dia mitaky ny fahazoana ny tsenanao sy izay mandeha, ary ny antony. Ankehitriny ny fijerena ireo famantarana ara-tsosialy (Facebook, Twitter) dia zava-dehibe iray, saingy hitako ny indostrian'ny B2B mahazatra ary koa ny fahasalamana, teknolojia, ara-dalàna sns. Tsy “mety” amin'ny fiarahamonina. Marina izany. Saingy eo ihany koa ny marketing amin'ny atiny, tsy hitanao izany amin'ny alàlan'ny fijerena ny buzz sosialy fotsiny. Izany no antony anorenako ny rindrambaiko vaovao handinihana ireo signal Buzz avy amin'ny Social, ary koa ny signal Impact (toy ny tena fandraisana andraikitry ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra, fomba fijery, tsindrio, rohy)
Ny vokatra dia antsoina hoe Impactana (http://www.impactana.com/ ) Ary milaza amiko tsara izay tokony ho fantatro mba hahitako hoe inona ny atiny niasa taloha ho an'ny indostria rehetra, na dia tsy buzzworthy aza izany ”(izany hoe atiny saka Viral). Hitako ihany koa raha nahomby ny varotra atiny na tsia. Izy io koa dia mampiseho ahy hoe toa inona ny marketing amin'ny atiny mahomby na ny ahy na ny mpifaninana amiko mba hahafahako mampiasa izany ho fomba fanao tsara hananganana. Angamba te-hijery ianao mba hahitanao ny safidy rehetra, ary ampahafantaro ahy raha hitanao fa mahasoa izany. Tena tsara ny maheno anao.
Jul 3, 2015 amin'ny 9: 22 AM
Misaotra Cristoph! Hizaha azy io aho.